Airtel Madagascar: nanome maimaimpoana ra ireo mpiasa | NewsMada
Airtel Madagascar: nanome maimaimpoana ra ireo mpiasa
Ny faran’ny herinandro teo, nanentana ny mpiasa rehetra ao aminy ny tompon’andraikitry ny orinasa Airtel Madagascar hanome maimaimpoana ra. Entina hanampiana ny sampandraharahan’ny fitahirizan-dra etsy amin’ny HJRA izany.
Betsaka ny antony ilana ra eny amin’ny hopitaly. Anisan’izany ny olona tratran’ny lozam-piarakodia sy ireo mandalo fandidiana ary ireo reny saro-piterahana. Eo indrindra koa ireo mila manolo ra noho ny antony tsy fahasalamana manokana…
Isan-taona, miantso ny mpiara-miasa rehetra handray anjara amin’ny fanomezan-dra toy izao ny orinasa Airtel Madagascar. « Natao izao hetsika izao hanampiana ireo mila ra sy hanairana ny mpiara-miasa amin’ny filatsahana an-tsitrapo hanome ra maimaimpoana… », hoy ny talen’ny Airtel Madagascar, i Bekangba Maixent.
Hatramin’izao, na efa mivoatra sy lasa lavitra aza ny tontolon’ny siansa, tsy mbola nisy manampahaizana nahavita namorona singa hafa mahasolo ny ran’olombelona. Zava-dehibe ho an’ity orinasa ity, araka izany, ny maha olona sy ny manampy ny vahoaka malagasy amin’ny alalan’ny fanomezan-dra.
Modely ho an’ireo orinasa rehetra ny nataon’ny Airtel Madagascar. Sady mamonjy aina no fanetren-tena lehibe ny fanomezan-dra ka mendrika ny halain-tahaka. Betsaka ireo mpiasa namaly ny antso, ny faran’ny herinandro teo, ary naneho fanavononana hanohy izao fanomezan-dra izao isan-taona ho fandraisana anjara amin’ny famonjena aina ho an’ireo mila izany.